पुस्तकमा करः विश्वले पत्याएका सरकारका अर्थमन्त्रीलाई हामीले कसरी पत्याउने ? - Everest Talk
पुस्तकमा करः विश्वले पत्याएका सरकारका अर्थमन्त्रीलाई हामीले कसरी पत्याउने ?1 min read
पाठकको पुस्तकको भोक रक्सी र मःमको भोकजस्तो क्षणिक होइन । पुस्तकको भोकको प्रभाव दीर्घकालीन रहन्छ ।
२०७६, १७ फाल्गुन शनिबार १२:४८
in एभरेष्ट टक विशेष, मुख्य समाचार, विचार, शिक्षा
करिब दुई साता भयो, राजधानी तथा राजधानबाहिरका विविन्न स्थानहरूमा सरकारले पुस्तकमा लगाएको करका विरुद्धमा विरोध प्रदर्शन भइरहेका छन् । माग सबैको एकै छ, पुस्तक करमुक्त हुनुपर्यो ।
पुस्तक माथिको करको विरोध अब काठमाडौँमा मात्र सीमित रहेन । स्वतन्त्र र स्वतःस्फुर्त रूपमा काठमाडौँबाहिरका पोखरा, झापा चितवनलगायतका स्थानहरूमा पनि आन्दोलन चर्कदो छ । केही प्रतिपक्षका नेता तथा कार्यकर्ताहरू पनि यसमा सामेल छन् । तर सत्तापक्षीय विद्यार्थी नेताहरू चुपचाप छन् । सरकारको पुस्तकमाथिको यस नियन्त्रणमा मौनताको साथ दिएर आफ्नो खुट्टामा आफैँ बञ्चरो चलाइरहेका छन् । यिनीहरूले पनि बुझ्नु पर्ने हो, ज्ञान स्थायी हो, तर सरकार अस्थायी ।
सरकारले हालका अर्थमन्त्रीलाई विश्वले नै पत्याएको भनेर प्रचार गरिरहेको अवस्थामा पुस्तकमाथि लगाइएको करका सम्बन्धमा म स्वयंको पनि विमति रहँदैआएको छ । त्यसैले गत बिहीबार यस विरोध प्रर्दशनलाई अगुवाई गरिरहनुभएको साथीहरू नवीन तिवारी, सागर चन्दलगायतका स्वरमा स्वर मिलाउन म पनि पाटन पुगेँ । जुन अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, राजनैतिक विश्लेषक सिके लाल, नेकपा नेता राम कार्की, लेखकहरू, पत्रकारहरूलगायत पनि सामेल भइसकेका छन् ।
जानैका लागि त म अरू नै दिन पनि जानसक्थेँ । तर त्यहीँ दिन म त्यहाँ टुप्लुकिनुमा मुलत दुई कारण थिए । पहिलोः यस विषयमा केही लेख्नु, र दोस्रोः कांग्रेसका विद्वान नेता तथा लेखक प्रदीप गिरी र प्रध्यापक तथा लेखक महेश पौड्याललाई सुन्न ।
अर्को कुरा के पनि छ भने, बिहीबारैकै दिन अहिलेका सरकारका विद्वान अर्थमन्त्रीले पुस्तकमा लगाउने कर फिर्ता नलिने भन्दै बरु बहस गर्न तयार भएको जनाएका थिए । पुस्तकमा लगाइएको करका विषयमा उनले तर्क गरेका थिए– “पुस्तकको व्यापार भनेको ज्ञानको व्यापार होइन । पुस्तकको व्यापार गर्दा नाफा कमाइन्छ भने कर पनि तिर्नु पर्छ ।“
प्रस्तुत दुई वाक्यमा सरकारका विद्वान अर्थमन्त्रीले दुई कुरा गरेको छन् । एक ठीक, र अर्को गलत । पहिलो कुरो के हो भने, सरकारले विद्वान भनी प्रचार गरिरहेका अर्थमन्त्रीले यो पनि बुझ्न जरुर छ कि पुस्तकको व्यापारलाई मात्र व्यापारको रूपमा हेर्नुहुन्न । होला, पुस्तकको व्यापार पनि व्यापारै होला । तर पुस्तकको व्यापार कमसेकम सुनको वा रक्सीको वा पेट्रोलको व्यापारजस्तै चाहिँ कहिकतै पनि होइन ।
दोस्रो कुरा, नाफा कमाइन्छ भने कर पनि तिर्नुपर्छ । विद्वान कहलिएका अर्थमन्त्रीसँग म सय प्रतिशत सहमत छु । तर तपाईँको विद्धता माथि भने मलाई शंखा लागेको छ । तपाईँ अर्थतन्त्रको विद्वान नभएर अन्य कुनै विधाको ज्ञाता हुनुहुन्छ वा तपाईँले अध्ययन गरेका अर्थशास्त्रका करसम्बन्धी सिद्धान्तहरू मैले पढ्दैगरेका भन्दा फरक थिए ? मलाई सरकारका विद्वान अर्थमन्त्रीसँग बहस गर्न मन लागेको छ ।
पुस्तक व्यवसायीले पुस्तकको व्यापारै गरेका छन्, सरकारले लियोस् तिनीहरूसँग चाहे जति हिसाब । चाहे जति कर । तर अहिले पुस्तक आयतमा जुन कर लगाइएको छ, त्यो पाठकले तिरिरहेका छन् । मैले तिरिरहेको छु । अब यो व्यापारमाथिको कर भयो कि ज्ञानमाथिको ? मैले कुनै किताब पढेर केही नाफा कमाउछु भने त्यो ज्ञान हो, मैले त्यही ज्ञानको नाफा बराबरको मूल्य चुकाउनुपर्ने हो ?
यहीँ अर्को कुरा पनि जोडौँ, सरकारका अर्थमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलनमा प्रश्न गरेका छन्,– “३०÷४० प्रतिशत नाफा खाने अनि १० प्रतिशत करचाहिँ तिर्न नमान्ने ?” उनको यो प्रश्न पनि जायज हो । नाफा खानेले कर तिर्नैपर्छ । तर उनले बिर्सिएकी नाफामा नभएर उनले पुस्तकको मूल्यमा कर लगाएका छन् । मूल्यमा लगाएको कर अप्रत्यक्ष रूपमा पाठकले तिर्नुपर्ने हुन्छ । र तिरिरहेका छन् । व्यापारीलाई त के छ, भोलि पुस्तक व्यापारमा नाफा नभएर, रक्सी पसल खोल्दिन्छन् । मःम पसल खोल्दिन्छन् । तर, पाठकको पुस्तकको भोक रक्सी र मःमको भोकजस्तो क्षणिक होइन । पुस्तकको भोकको प्रभाव दीर्घकालीन रहन्छ । अर्थमन्त्रीलाई यति पक्कै थाहा हुनुपर्ने हो, मूल्यमा कर लगाएपछि त्यसको अप्रत्यक्षा प्रभाव पाठकमा पर्छ, जो खाजाको पैसा बचाएर पनि किताबमा लगानी गर्नेगर्छन् ।
मैले सरकारका विद्वान अर्थमन्त्री भनेँ । यति मलाई खुस लागेको भए म मेरो÷हाम्रो सरकारको अर्थमन्त्री भन्न सक्थेँ । वा मेरा अर्थमन्त्री नै पनि भन्न सक्थे । तर न यो सरकार हाम्रो बनेको छ, न अर्थमन्त्री नै बनेको छन् । यसै विषयमा म महेश पौड्याललाई उल्लेख गर्न चाहान्छु– “म विश्वविद्यालयमा अंग्रेजी प्रध्यापन गराउँछु । हामी स्नातकोत्तर पढ्ने विद्यार्थीलाई प्रायः सबै विदेशी पुस्तक सिफारिस गर्छौँ । मलाई विश्वास के थियो भनेँ सर्वहारा वर्गको भनिएको सरकारले यतिचाहिँ बुझ्छ कि सर्वहाराका छोराछोरी पढ्ने विश्वविद्यालयका पुस्तक पाउण्ड स्टर्लिगंमा छापिएको हुन्छ । आफैँमा मंहगो किताबको मूल्य कर लगाएपछि कहाँ पुग्छ । हाम्रा विद्यार्थीले कसरी पढ्छन् ?”
सर्वँहारा वर्गको समाजवादी भनिएको सरकार तिनै जनाताको संवेदनाबाट टाढा भागिरहेको अवस्था हो यो । उद्योग प्रर्बदनको नाममा सरकारले जनतालाई झन् झन् गरिब तुल्याइरहेको छ । त्यसको उदांगो उदाहरण हो मूल्यस्फिति अर्थात् मूल्यवृद्धि । सरकार न जनताको भावनासँग जोडिन सकेको छ, न त दैनिकीसँग । राष्ट्रिय आम्दानीको स्रोत खोज्ने बाहानामा सरकार (सरकारका अर्थमन्त्री) जनताको स्तर भूलिरहेको छ । जनताको आम्दानी भूलिरहेको छ । र, अप्रत्यक्ष करको दायरा बढाएर जनताको दिनदैनिकीबाट टाढा भागिरहेको छ ।
महेश पौड्यालको प्रश्न छ– “सरकारले भनिदिनुप¥यो, सरकारका छोराछोरीले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको भन्दा धेरै पढ्न पाउनेछैनन् ?” बहसमा उत्रिएका अर्थमन्त्रीसँग पक्कै यो प्रश्नको पनि उत्तर हुँदो हो । फेरि पढेरै पनि माननीय अर्थमन्त्रीको जस्तो सर्वँहारालाई पैलतामुनि नै दबाइराख्ने ज्ञानको हामीलाई के काम र ?
लेखक तथा कांग्रेसका बौद्धिक नेता प्रदीप गिरी अर्थमन्त्रीसँग बहस गर्न चाहादैनन् । उनलाई थाहा छ, उनीसँग बहस गर्नुमा अर्थ छैन । “कर लगाउँदा न्याय पनि हेरिन्छ, कर लगाउँदा आम्दानी मात्र हेरिँदैन । किताब, शिक्षा, स्वास्थ्य, पौष्टिक आहारमाथि घाटा सहेर भए पनि कर लगाउनुहुँदैन । किताब भनेको मान्छेको सांस्कृतिक विकास हो । किताब भनेको यसको मूल्य मात्र होइन । किताब त सांस्कृतिक धरोहर हो ।” उनी भन्छन्– “म अर्थमन्त्रीज्यूसँग बहस गर्न चाहान्न् । मेरो प्रश्नका उत्तरहरू उहाँसँग उसै थात लागेर बसेका छन् । यति भन्न चाहान्छु, अर्थमन्त्री तपाईँ नै रहनुहोस् । तपाईँका तर्कहरू तपाईँसँगै राख्नुहोस् । तर किताबमा कर हटाइदिनुहोस् । नत्र यो आन्दोलन धेरै टाढासम्म जान्छ । त्यतिबेला तपाईँलाई बहस गर्छु भन्न पनि गाह्रो पर्नसक्छ ।”
अनलाइन अबरमा छापिएको समाचारलाई आधार मान्दा अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता उमेरकुमार खत्रीले भनेको छन्– “डाक्टर, इञ्जिनिरयका किताबहरू नेपालमा छापिन्नन् । के लाखौँ लाख खर्च गरेर पढ्न सक्नेले १० प्रतिशत कर तिर्न सक्दैनन् र ?” सरकारी प्रवक्ताकै यस किसिमको तर्कबाट प्रष्ट हुन्छ, अहिलेको सर्वहाराको भनिएको सरकार कस्ता बौद्धिक व्यक्तिबाट घेरिएको छ ।
खत्रीलाई थाहा हुनुपर्ने हो, नेपालमा सबैले पैसा भएर होइन, ज्ञानको भोक भएर पढिरहेका छन् । डाक्टरी पढ्नैका लागि कतिमा अभिभावकले खेतबारी बन्दकी राखेका छन् । र, सबैभन्दा ठूलो कुरा, एउटा बाइक चढ्नलाई पेट्रोल हाल्न नसक्ने भए नचढ भन्न सकिन्छ । तर पढ्न चाहानेलाई पढ्न सक्दैनस् भने नपढ् भन्न कदापी पाइँदैन । यो ज्ञानमाथिको नियन्त्रण हो । र, प्रवक्ता खत्रीको भनाईबाट पनि यही कुरा प्रष्ट हुन्छ ।
खासमा भन्ने हो भने सरकारसँग, अझ् अर्थमन्त्रीसँग पुस्ताकभित्रका ज्ञान होलान, तर पुस्तकसँग जोडिएको विज्ञान र मनोविज्ञानको ज्ञान कति पनि छैन भन्ने पष्ट्र भइसकेको छ । कुन किताब कति जान्छ, नेपालको बजार कत्रो छ, नेपालका पाठकले मात्र यहाँको पुस्तक उद्योग प्रर्वधन हुन्छ ? आदि प्रश्नको सरकारसँग न जवाफ छ न कुनै तथ्यांक नै । अर्थमन्त्रीले त तथ्यांकमा टेकेर नीतिल्याउनु पर्ने हैन ?
प्रकाशकका कुरा अलि भिन्न छ । लेखक तथा प्रकाशक कृष्ण अविरल अर्थमन्त्रीलाई सोध्न चाहान्छन्– “अहिले ४० प्रतिशत छुटमा खरिद गरेर वैध रूपमा भन्सार र अन्य गरी १८५ कर तिरेर ल्याएका अङ्ग्रेजी पुस्तक राजस्व कार्यालयले जफत गरिरहेको छ । राजस्वका कर्मचारीको तर्क ३३ प्रतिशतभन्दा बढी छुटमा पुस्तक आयात गर्नु अवैध हो । तर त्यो छुटमा पुस्तक आयात गरेर व्यवसायीले व्यवसाय धान्नै सक्दैन । बरु उसले व्यवसाय छाड्छ र घरमा आनन्दले सुत्छ । किनकि विदेशी पुस्तक आयात गर्दा भन्सार र अन्यसहित १८ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । ढुवानीवापत् १३ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्छ । ढुवानीमा थप दश प्रतिशत खर्च हुन्छ । अर्थात् कूल ३१ प्रतिशत खर्च भएर गोदाममा आइपुग्छ । त्यो पुस्तकमा उसले कसरी थोक कारोवार गर्न सक्छ ? कसरी मुनाफा गरेर कार्यालय सञ्चालन गर्न सक्छ ? कसरी कर्मचारी पाल्न सक्छ ? कसरी सरकारलाई वार्षिक आयकर र नगरपालिकालाई घर बहाल कर तिर्न सक्छ ? लगानी र मिहिनेत वापत् उसको मुनाफा खोई ?”
पक्कै यी प्रश्नको जवाफ पनि सरकारका विद्वान अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडासँग तयार होलान् !
Tags: make books tax freeअर्थमन्त्रीकृष्ण ढुङ्गेलपुस्तकमा कर